KUUMBWA KUGADZIRA - Chapman Technology Co, Ltd.
Runhare: + 86-0755-2826 9320
KUUZA KWAKAWANDA KWAKAKWANA
DUKU CHAKANYANYA KUUMBISA
Isai KUUMBWA UYE KUKUNDA
LSR & RUBBER KUUMBWA
Kugadzirwa kweLSR & Rubber
CNC yekugaya muchina isimba rekugaya muchina neCNC (Computer Numerical Controlled) inodzora, iyo inoshandiswa kugadzira 2D / 3D maumbirwo kana mapatani pazvinhu zvakasiyana. CNC hwokugaya hwakabvira CNC machine nzira yakafanana zvose nokuveza nokuveza, uye anokwanisa kuzadzisa zvakawanda akavhiyiwa rinoitwa nokuveza nokuveza michina. Kufanana nekuveza, chigayo chinoshandisa chinotenderera cylindrical chishandiso. Nekudaro, chishandiso chiri muchigayo cheCCC chinokwanisa kufamba pamwe chete neingi axis, uye inogona kugadzira akasiyana maumbirwo, slots nemakomba. Uye zvakare, iyo yekushandira inowanzo fambiswa kuyambuka chigayo chekugaya munzira dzakasiyana. Kuti uwane kuhwina mumusika mamiriro, Chapman Muitikambani iri kuenderera mberi nekudyara mu-kumhanya-kumhanyisa CNC kugadzira michina Tine maseti mana emhando yepamusoro-soro MAKINO ekugadzirisa michina kubva kuJapan, iyo chaiyo inogona kusvika 0.005-0.01mm.
Uye zvakare, isu zvakare tine 4 CNC michina ye semi-yekupedzisa uye 2 kuomesa.
Chapman Muiti's CNC yekugadzirisa michina inogona kusangana neyako yese yekugadzirisa zvaunoda, kwete kungoisa zvimisikidzo, zvimedu zvekuumbisa, zvikamu zvevhu, asi isu tinogona zvakare kupa CNC machining masevhisi ehuwandu hwakawanda hwenzvimbo dzevamwe vatengi vemagetsi.
Electrical buditsa machining (EDM), inozivikanwawo se "spark" machining, hunyanzvi hwave huripo kwenguva yakareba. Munguva yeEDM maitiro, magetsi emagetsi anonongedzwa kuti apfuure pakati pesekodhi uye chinhu chebasa chakakamurwa nedhielectric yemvura, iyo inoshanda seyemagetsi insulator. Kana kamwechete hwakakwana voltage ikaiswa, iyo dielectric fluid inoiswa ionized uye inoshanduka kuita conductor yemagetsi uye inokanganisa iyo workpiece nekuburitsa spark spark kuigadzira iyo fomu raunoda kana chimiro chekupedzisira.
Kana uchinge uchishanda mukati mekushushikana kwakasimba kunodiwa muindasitiri yeMold, zvakakosha kuti ugadzire michina chaiyo EDM (Magetsi Kuburitsa Muchina) Mashini Ekucheka waya anoshanda akabatana neyedu yakasimbiswa machining nyanzvi uye mainjiniya department, inopa General Kugadzira nehunyanzvi hunodiwa kuti ushande mukati meiyi indasitiri.
Kugaya inzira yekugadzira michina uchishandisa macheka anotenderera kuti ubvise zvinhu nekufambisa mucheka muchidimbu chebasa. Izvi zvinogona kuitwa zvakasiyana nongedzo pane imwechete kana akati wandei masanhu, cutter musoro kumhanya, uye kumanikidza.
Kune mamwe chaiwo maumbirwo, kuenzanisa kwakaringana kweedu Kuisa, Anosimudza, Anotsvedza, uye zvimwe zvakaumbwa zvikamu zveforoma kwakakosha. Kazhinji, iko kugadziriswa kwakaringana kweguyo redu rinofanira kunge riri mukati me055mm.
Kukodzera muforoma uye Assembly:
Kune zvikwata zvisere musangano redu remusangano. Mashanu emapoka eforoma anokonzeresa kugadzirwa kwemahofisi ekunze, uye mamwe mapoka matatu akarongedzerwa kuumbwa kwedu kwemhuri.
Mushure meforoma yakakodzera muforoma yapera, isu tinofanirwa kuchengetedza iyo mold nekuipolisha. Simbisa kuti mhando yeforoma inogona kusangana nezvinodiwa bvunzo nekukurumidza sezvazvinogona.
ShenZhen Hofisi: Kwete. 1113, Hengping Dong Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen Guta, Guangdong Province, China.
Chigadzirwa Zvigadzirwa muChiso che COVID-19
COVID-19 Panguva inotyisa, nguva dzekutambudzika ...
Vagadziri veMold vanotarisa kuunganidza inotevera ...
Kufanana neakawanda uye mamwe maindasitiri anotengesa ...
LSR emvura silicone muforoma kunyorera
Liquid silica gel yakapfupikiswa seLSR, ...